Malunga nathi-Iimveliso zeGlasi zeXuzhou Chuancheng Co, Ltd.
IXuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.is iqumrhu lemveliso elisebenza ngobuchule bokuvelisa iiglasi zebhotile, itekhnoloji yokusika, iimveliso zeglasi eziphezulu zeglasi. Inkampani enamanzi afanelekileyo, umhlaba kunye nokuhamba komoya, kufutshane ne-Lianyungang port. Sinemigca emi-5 yokuzenzekelayo yemveliso kunye nemigca yokufakelwa engama-20, enokuvelisa iibhotile ezizigidi ezingama-2,8 ngosuku. Abasebenzi bethu benkampani ekhoyo bangaphezulu kwe-500, kubandakanya nabasebenzi abanamava abangama-28 abanamava kunye nabasebenzi bokuvavanya umgangatho. Inkampani yethu ihlala ilandela inkonzo, isebenza ngokunyaniseka, Hlala uphucula, uMgangatho kuqala, ukubaluleka kwabaThengi '.
Umzi mveliso wethu uvelisa iintlobo ezininzi eziphambili
Ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkqubo yolawulo oluphezulu lwenzululwazi, sele sisekekile ubudlelwane bezeshishini kunye nabathengi abaninzi basekhaya nabangaphandle. Ukunyaniseka okukhulu, amandla enkampani kunye nomgangatho wemveliso.
Kutheni ukhetha Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.
Umzi-mveliso we-ur uvelisa iintlobo ezingaphezu kwama-800 eziphambili: Ibhotile yeglasi yobusi, ibhotile yeglasi, ibhotile yeglasi, ibhotile yesosi yesiselo, ibhotile yeviniga, ibhotile yeoli, ibhotile yeoli, ibhotile yesiselo, ibhotile yeglasi, ibhotile yeglasi, ibhotile yefuru, isithonga Ibhotile, ibhotile ye wayini yeziqhamo, ibhotile ye wayini yezempilo, ibhotile yejusi, ibhotile yamayeza, ibhotile yekofu, ikomityi, ibhotile yokulawula ibhotile yeglasi, isiphatho sesibane seglasi, isitya seglasi, isiphatho sendebe, amanzi. Ikomityi, ibhotile engamanzi yomlomo, ibhotile yeti eneziqhamo, ibhotile yesiselo somdiliya, ibhotile yesiselo somdiliya, ibhotile yezithambiso, ibhotile yeOfisi, ibhotile ye-oyile yomoya, ibhotile yekrisimu, ibhotile yenkcubeko yezititi njalo njalo. Ingasetyenziselwa ukuqhubekisa izinto ezinzulu zeglasi ezinje ngefrosting, ukutshiza, ukuprintwa kwesilika, ukubhaka, ukukrola, izitya zesonka, njl.